Akụkọ-nwalere oge: 7 ọgwụgwọ ịbelata ibu na-adịghị emerụ ahụ ịnwale na Dubai | Ahụike & Mma
Enweghị agọnarị na ụzọ kachasị mma iji felata bụ iri nri dị mma na imega ahụ mgbe niile, mana nke a apụtaghị na anyị enweghị ike iji obere enyemaka.
Dịka nwanyị nọ n'afọ iri atọ na ụma, anọwo m na -agbalị ifelata ruo ọtụtụ afọ. N'ime afọ iri gara aga, anwalewo m ọtụtụ ọgwụgwọ ịbelata oke ibu na-adịghị emerụ ahụ na UAE. Site na gas mmanụ na -egbu egbu ruo plastik jụrụ oyi, ọbụlagodi ịhịa aka n'ahụ mmiri mmiri.
Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike nwee akpa abụba dị isi ike, nke na -esiri ha ike ibelata n'agbanyeghị nri na mgbatị ahụ.
Ọgwụ a, nke a makwaara dị ka ịhịa aka n'ahụ cellulite, bụ ụzọ dị ọnụ ala karịa nke nwere ike belata sentimita ole na ole nke abụba anụ ahụ. Ọ bụ igwe ihe nhicha nwere ike ịhịa aka n'ahụ gị ma kpalie lymph na mgbasa ọbara.
Ọ bụkwa ọgwụgwọ mgbochi cellulite, n'ihi na ịhịa aka n'ahụ nwere ike imezi mgbasa ọbara yana chụpụ nsị. A na -ewepụta mkpụrụ ndụ abụba site na sistemụ lymphatic iji mee ka akpụkpọ ahụ sie ike na ọbụna.
Dịka onye ahụike, enwere m mpaghara nsogbu, nke ahụ bụ afọ m. A bu m ezigbo nwa akwukwoCRYOLIPOLYSIS. Adịghị m oke ibu, mana enwere mpaghara nke na -esi isi ike imega ahụ. Ngwọta ahụ gụnyere ka ị yikwasị akwa mkpuchi azụ ka igwe ahụ ghara ịhịa aka n'ahụ gị ozugbo. Ọ na -ewute m mgbe niile maka mgbu ahụ, mana n'ikpeazụ ọ ghọrọ ihe m na -atụ anya ya. Ekpebiri m ilekwasị anya ọkachasị mpaghara afọ m ma leba anya n'úkwù m na azụ m.
Aha nka bụ lipolysis kpọnwụrụ akpọnwụ, nke bụ usoro “mkpụrụ ndụ” abụba abụba. Ịkpụzi mma enwere ike ime ya n'ọtụtụ akụkụ ahụ, gụnyere agba, apata ụkwụ, afọ na ikpere, yana abụba bra, abụba azụ, isi na n'okpuru ogwe aka elu.
CoolSculpting bụ teknụzụ a na -ekwu iji belata mpaghara abụba na -achọghị na ahụ, ọkachasị ntụpọ, site na igbu mkpụrụ ndụ abụba na obere okpomọkụ. Ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ndụ abụba mmadụ nwere agaghị ebelata. Ha na -agbasawanye ma ọ bụ nkwekọrịta, mana enweghị ike ịchụpụ ha n'anụ ahụ. Ngwa CoolSculpting na -eme ka abụba gị jụọ oyi ruo na ọnọdụ okpomọkụ na -ebibi ya, na -echekwa akpụkpọ ahụ gị na anụ ahụ ndị ọzọ ka ha ghara imerụ ahụ.
Ahụ ga -eji nwayọọ nwayọọ kpochapụ sel abụba ndị jụrụ oyi n'ime ọnwa 4 ruo 6. N'ime oge a, olu abụba ga -adalata, na abụba abụba ga -ebelata ihe dịka 20%.
Aga m asị na ihe mgbu dị 6 n'ime 10. N'oge a na -arụ ọrụ ahụ, ọ dị m ka m na -afanyekwa ụfụ, oyi na -atụkwa m nke ukwuu. N'ikpeazụ, mpaghara ahụ ghọrọ ọgbụgbọ mgbe ọ jụrụ oyi.
Ekpebiri m itinye uche m niile na afọ m. Enwere m nkịta n'okpuru bọtịnụ afọ m n'oge ọgwụgwọ mbụ m. Ọ na -adị m ka m nwute na igwe dị na akpụkpọ ahụ m. Ahụ erughị m ala ịrịa oyi na mbụ. Mana ịmara ya, n'ikpeazụ, alaghachiri m ịga nzukọ ndị ọzọ, nke pụtara na ọ bụghị ihe ọjọọ.
Ọ na -ewe naanị otu nnọkọ iji hụ ihe dị iche, mana agbakwunyere m abụọ ọzọ iji bulie nsonaazụ ya n'ezie.
Jụụ Ịkpụzina -abụkarị otu n'ime ọgwụgwọ ịbelata oke ibu m rụtụrụla. Karịsịa mgbe m jikọtara ya na ezigbo nri. N'eziokwu, ọ belatara oke mkpirisi afọ m ma gbaa m ume iri nri ka mma